ULucrezia Borgia, Intombi engekho mthethweni wePapa
Intombi engekho mthethweni wePapa
ULucrezia Borgia wayeyintombi engekho mthethweni kaPapa uAlexander VI (uRodrigo Borgia ) ngenye yeentombi zakhe. Wafumana udumo njengomntu onobuthi kunye nomcebisi. Wayenokuba yixhoba leentlebo ezimbi ezigqithiseleyo izinto ezimbi, kwaye mhlawumbi wayengenayo inxaxheba kwizakhiwo zikayise kunye nomzalwana wakhe. Ukumangalelwa komntu osenyongweni kunye noyise kunye / okanye umzalwana umrhwexela.
Wayenemitshato emithathu yezopolitiko, ilungelelanisa intsapho yakhe, kwaye mhlawumbi yayineenxalenye ezininzi zokuzibandakanya, kuquka, mhlawumbi, umntwana ongekho mthethweni. Kwakhona unobhala we-papal unobhala, kunye neminyaka yakhe kamva esetyenziselwa ukuzinza ngokobuhlobo njenge "Duchess Good" kaFerrara, ngezinye izikhathi esebenza njengombusi osebenzayo ekungabikho komyeni wakhe.
Siyazi Njani Ngobomi bukaLucrezia?
Siyazi ngobomi bukaLucrezia ngokubhekiselele kumabali athethwa ngabanye, ezinye zeentshaba zentsapho yakhe. Ukhankanywe kwezinye iileta ngabanye - kwakhona, ezinye zezinto ezikhankanyweyo ziyakwazi ukunyaniseka okanye ukuthetha kakubi, kunikwe amandla okulwa naye. ULucrezia washiya iileta ezimbalwa, kodwa ezinye zazo zazibhalwa ziyazi ukuba ziya kulandelwa kwaye zifundwe, ngoko abaninzi abanasiphi na ingqiqo ecacileyo kwizinto zakhe okanye ezinye iinkcukacha malunga nemisebenzi yakhe. Ezinye imithombo yolwazi ziquka ezo rekhodi njengeencwadi ze-akhawunti.
Intando yakhe ayiyi kuphila, nangona kubhekiswa kuyo kwezinye iincwadi ziphila.
Ixesha lokuphila kukaLucrezia lilandela le nkcazelo.
ULucrezia Borgia wayehlala kwisiqingatha sokugqibela sexesha laseNtaliyane lokuzalwa . I-Italy yayingekho ubukumkani obumbeneyo, kodwa yayinabathetheli abaninzi beedolophu, ii-republics, kunye nezinye iziphathimandla.
Ukulungelelaniswa okutshintshileyo, kubandakanywa nesiFrentshi okanye amanye amagunya, kwiimvavanyo zomphathi ngamnye wendawo kunye nentsapho yabo yokwakha nokugcina amandla. Ukubulala kwakungeyindlela engavamile yokujongana neentshaba.
Icawa yamaRoma Katolika yelo xesha yayiyingxenye yale mizabalazo yamandla; Ukulawula ubupapa kwakuthetha ukulawulwa kwamanyulwa amaninzi, kubandakanywa ubhishophu kunye namaziko. Nangona imithetho ye- celibacy yayingamadoda esatshatileyo kubabingeleli, kwakuqhelekile ukuba neentsimbi, zidla ngokucacileyo.
Intsapho yaseBorgia yayivela eValencia kwinto eyayiba yindibanisa eSpain. U-Alfons de Borja wakhethwa njengoPapa uCalxtus III ngo-1455. Udadewabo, u-Isabel, wayengunina kaRodrigo owamukela isiNgesi, uBorgia, igama lonina, uBorja.
Uyise kaLucrezia uRodrigo wayengumKhadidi xa wazalwa. Wayengumntakwabo uPapa Calixtus III. Unina kaLucrezia wayeyinkosikazi yakhe iminyaka ethile, uVannozza Cattanei, owayengumama wabantwana ababini abadala kakhulu ngoRodrigo, uGiovanni (ngesiSpanish, uJuan) noCesare. Emva kokuba uRodrigo abe nguPapa njengoAlexandria VI, waqhubela phambili ecaweni yezilwanyana ezininzi zaseBorja naseBorgia.
URodrigo wayenabanye abantwana ngabanye abahlukumezayo; maxa wambi ahlawulwa ngezinye ezisibhozo kwaye ngamanye amaxesha asithoba.
Indodana, uGiffre, kungenzeka ukuba yi-Vannozza. Igama lomfazi ongaphambili, unina wabantwana bakhe abathathu (uPere-Lluis, uGirolama no-Isabella) akaziwa. Inkosikazi kamva, uGulia Farnese, wayengunina ka-Orsino Orsini noLaura Orsini, bacinga ukuba ngabantwana bakaRodrigo (watshata no-Orsino Orsini).
Ixabiso lentombi ngexesha elinjalo liyinjongo yokuqinisa ubudlelwane bezopolitiko, nokongeza kwintsapho. Ngokuqinisekileyo ubomi bukaLucrezia babonakalisa ukutshatyalaliswa kwentsapho.
Ngaba uLucrezia Borgia Wajonga Njani?
ULucrezia Borgia wayechazwa njengelungileyo, eneenwele ezinde zegolide ezide, ezathi, njengomntu omdala, wachitha ixesha elide lokuzilungisa, kwaye wahlanjululwa ukuze alondoloze. Ngokungafaniyo nomkhwekazi wakhe u- Isabelle d'Este , asinayo iifoto esinokuqiniseka ukuba yiLucrezia, ngaphandle kweendondo zebhedu.
Ngomnyaka we-2008, umlando wezembali wachaza ukuba wayeqinisekile ukuba i-portrait ende eyaziwa nje ngokuba "Umfanekiso Wobutsha" ngumdwebi ongaziwayo, wawucwecwe ngu-Ferraro-based Dosso Dossi. Kuye kwacingelwa ukuba ezinye iindlela zokudweba zisekelwe kuLucrezia Borgia, ngokubhekiselele kwi-Pinturicchio's Disputation of Saint Catherine kunye nePhoto yaMfazi nguBartolomeo Veneto.
U-Lucrezia wazalwa eRoma ngo-1480. Akuninzi into eyaziwayo ngobuntwana bakhe, kodwa malunga no-1489, wayehlala nozala wakhe wesithathu, u-Adriana de Mila, kunye nenkosikazi yakhe kayise, uGiulia Farnese, owayetshatile ku-Adriana. U-Adriana, umhlolokazi, wayekhathalele uLucrezia, owayefundiswe kwiConvent yaseSt. Sixtus . Njengomdala, wakwazi ukubhala ngesiFrentshi, iSpanish nesiTaliyane; oku mhlawumbi kwakuyingxenye yaloo mfundiso yokuqala.
Ekubeni ngo-1491, uyise kaLucrezia wayelungiselela umtshato wakhe kunye nodumo lwaseValencian, kunye nedowry ebekwe kuma-dicats ayi-100 000. Kwiinyanga ezimbini emva koko, uRodrigo waqhekeza eso sivumelwano, kungekho sizathu sinikela, kodwa mhlawumbi wayeneminye imibono ngomtshato wakhe. URodrigo walungiselela umtshato waseLucrezia nendodana yokubala e-Navarre, kwaye ke leyo mvukhontrakthi yachithwa kwakhona.
Xa uKhadimali Rodrigo wakhethwa uPapa ngo-1492, waqala ukusebenzisa loo ofisi kwintsapho yakhe. UCesare, omnye wabazalwana bakaLucrezia owayeneminyaka eli-17 ubudala, waba ngu-archbishop, kwaye ngo-1493 wenziwa ngumkhadikhadi. UGiovanni wenziwa nguMdumba kwaye wayefanele aphephe imikhosi yamapolisa. UGiffre wanikwa amazwe athatyathwe ebukumkanini baseNaples.
Kwaye kwaqulunqwa umtshato omtsha weLucrezia.
Umndeni waseSforza waseMilan ungenye yeentsapho ezinamandla kunazo zonke e-Italy, kwaye yayisekela ukhetho lukaPapa uAlexander VI. Kwakhona babedlelana noFaro waseFransi ngokumelene neNaples. Ilungu lomndeni waseSforza, uGiovanni Sforza, wayenkosi yedolophu encinci yase-Adriatic yokuloba, iPerano; wayengumntwana ongekho mthethweni we-Costanzo mna uSforza ngoko ke umntakwabo kaLudovico Sforza owayengumbusi waseMilan. Kwakunjalo noGivanni Sforza ukuba uAlesandria walungiselela umtshato waseLucrezia, ukuvuza umndeni waseSforza ngokuxhasa kwabo kunye nokubopha iintsapho zabo ndawonye.
ULucrezia wayeneminyaka engama-13 xa watshata noGivanvan Sforza ngoJuni 12, 1493. Umtshato wawubaluleke kakhulu, kuquka nabesifazane abangama-500 ababekhona. Izipho ezilahlayo zanikwa. Kwaye kwaphawulwa ukuziphatha kakubi.
Umtshato wawungekho uvuyo. Kwiminyaka emine, uLucrezia wayekhalaza ngokuziphatha kwakhe. UGiovanni uphinde wamtyhola uLucrezia wokungaziphathi kakuhle. Intsapho yaseSforza yayingasamkeli uPapa; ULudovico wayeyicaphukisa amaFrentshi ayephantse alahle iAlexandria yakhe papa. Uyise kaLucrezia nomntakwabo uCesare baqala ukuba nezinye izicwangciso zeLucrezia: UAlexander wayefuna ukutshintsha imibambano esuka eFransi eya eNaples.
Ekuqaleni ngo-1497, uLucrezia noGivanvan bahlukana. Ezinye iingxelo zinezilumkiso zikaLucrezia uGivanni ukuba uyise wayalayile ukuba abulawe. UGiovanni waya ePeraro, mhlawumbi ukuba aphunyuke naziphi na izicwangciso zikaCesare okanye uAlexandro kwakufuneka ambulale; ULucrezia waya kwiConvent of St.
Sixtus apho wayefundiswe khona.
Ukuphela komtshato wokuqala
AmaBorgiya aqalisa inkqubo yokuqhawula umtshato, ehlawula uGivanni ngokungenasiphelo kunye nokungabikho komtshato. UGiovanni, owayenomntwana emtshatweni wakhe wokuqala, waqhayisa ngokuba walala noLucrezia ubuncinane amawaka angama-1000 emtshatweni wabo omfutshane. Kwakhona waqala ukusabalalisa ukuba uAlexander noCesare babenemigangatho yokuqulunqa iLucrezia. UPapa wacela uncedo lweCardinal uAscanio Sforza onamandla (owayengumbhikisho lwakhe lokhetho lwamapolisa) ukukholisa uGiovanni ukuba avume ukuqeda umtshato; Intsapho yaseSforza icinezela uGivanni ukuba aphelise umtshato, ngokunjalo.
Ekugqibeleni, uGivanvan wavuma ukutshitshiswa. Wavuma ukuvuma ukungabi namandla ekutshintsheni ukugcina udoti olunzulu uLucrezia ayelethe emtshatweni. Kusenokwenzeka ukuba naye wayesaba imiphumo yokunganyangeki. Ngomnyaka ka-1497, umzalwana kaLucrezia uGiovanni Borgia wabulawa kwaye umzimba wakhe wachitheka eMlambo iTiber ; UCesare waxelwa ukuba uye wabulawa ngumntakwabo ukuze azuze ifa lakhe kunye neendawo zakhe. Umtshato kaLucrezia Borgia kunye noGiovanni Sforza wagqitywa ngoDisemba 27, 1497.
Okwangoku, uPapa kunye nendodana yakhe, uCesare, babelungiselele umtshato wesibini uLucrezia. Ngeli xesha, indoda yayinguAlfonso d'Aragon, uDuke waseBisceglie, owayeneminyaka eli-17 ubudala. Uthiwa yindodana engekho mthethweni kaKumkani waseNaples. UmSpaniard, uPedro Caldes, wayephethe uxanduva lokuxoxisana.
Ngethuba lokuchithwa komtshato wakhe wokuqala ngenxa yezizathu zokungabikho komtshato, uLucrezia wayebonakala ekhulelwe. UPedro Caldes wavuma ukuba nguyise, nangona amahemuhemu ayenjalo nguCesare okanye uAlesandria wayengowona ubaba. U-Pedro Caldes kunye nomnye wezintombi zikaLucrezia babulawa baphoswa kwiTiber; Amahemuhemu athi uCesare. Abanye abaphengululi bayathandabuza ukuba uLucrezia wayekhulelwe okanye wayenonyana ngeli xesha, nangona ukuzala kwakhe kubhalwe kwileta yexesha.
ULucrezia, oneminyaka engama-21 ubudala, watshata no-Alfonso d'Aragon ngecala ngo-Juni 28, 1498, kwaye ngomntu ngoJulayi 21. Umthendeleko ofana naye kuloo mtshato wokuqala wawubhiyozela umtshato wesibili.
Ngo-Agasti, umzalwana kaLucrezia uCesare waba ngumntu wokuqala kwimbali yecawaya ukulahla i-cardinalate yakhe; Wabizwa ngokuba nguDuke waseValentinois ngosuku olufanayo ngukumkani waseFransi uLouis XII.
Umtshato wesibini unomdla ngokukhawuleza kunokuba ngowokuqala. Kuphela konyaka kamva, ezinye izivumelwano zazilinga amaBorgias. UAlfonso washiya iRoma, kodwa uLucrezia wamtshela ukuba abuyele. Waqeshwa njengegosa laseSpoleto. NgoNovemba 1, 1499, wazala unyana ka-Alfonso, wamthiya nguRodrigo ngoyise.
NgoJulayi 15 wonyaka olandelayo, u-Alfonso wasinda inzame yokubulawa. Wayehlala eVatican kwaye wayehamba ekhaya xa ababulali ababeqashiweyo bebetha ngokuphindaphindiweyo. Wayekwazi ukuyenza ekhaya, apho uLucrezia wayemnakekela khona kwaye waqesha abalindi abaxhobileyo ukuba bamkhusele.
Phantse inyanga kamva, ngo-Agasti 18, uCesare Borgia wa tyelela uAlfonso, owayephelile, ethembise "ukugqiba" oko kwakungazange kugqitywe ngaphambili. UCesare wabuyela kamva kunye nomnye umntu, wakhupha igumbi, kwaye, njengokuba omnye umntu wachaza ibali, wayesebenzela umngane wakhe uAlfonso.
ULucrezia kuthiwa wabhujiswa ngokufa komyeni wakhe. Uyise kunye nomntakwabo babethukuthele ngenxa yokulila kwakhe kangangokuthi bamthuma eNipi kwiintaba zase-Estruscan ngohlobo lokubuyela ekhaya.
ULucrezia, ngeli xesha, wabonakala kwinkampani eneminyaka emithathu ubudala. Abaninzi bakholelwa ukuba lo ngumntwana owabeletha emva kokuba umtshato wakhe wokuqala usuphelile. UPapa, mhlawumbi ukuzama ukukhusela igama likaLucrezia, wakhupha inkunzi yenkomo yomntu echaza ukuba umntwana nguKesare ngumfazi ongachazwanga igama, kwaye ngoko ke umshana kaLucrezia. Ngenxa yezizathu ezingaziwa, u-Alexander wanyathelisa ngasese, ngelo xesha, enye inkunzi yenkomo, eyazibiza ngokuba nguyise. Umntwana ogama linguGiovanni Borgia, owaziwa ngokuba yi-Infans Romanus (umntwana waseRoma).
Ubukho bomntwana, kunye nale mivume, yongeze umlilo kumathambo angamaqabane aqalwe yiSforza.
Emuva eRoma, uLucrezia waqala ukusebenza eVatican kwicala likayise. Wayiphatha i-imeyile yepapa waza wayiphendula xa engekho edolophini.
Iindlebe malunga noLucrezia zondliwa ngumsebenzi wakhe kunye noyise, kwakunye nokuba khona komntwana. UCésare wayephethe amaqela angamakhwenkwe eVatican, kunye neengxelo zeengcali ezinjenge-50 zabasetyhini kunye nabamahenyu angama-50 abhenela iqela ngokudlala ngokwesondo. Ingaba upapa noLucrezia beya kula maqela okanye kungabikho, okanye bashiye phambi kweengxowankulu, bephikisana ngabadumi beembali. Abanye ngelo xesha bavakalisa ukuhlonela kwakhe kwaye bambiza ngokuba nobuhle; Ngaba yinyani? Izazi-mlando azivumelani, kodwa abaninzi namhlanje baxhomekeke kwimbono yokuba uLucrezia wayengenayo inxaxheba ebambe iqhaza echazwe njengabalandeli beembali.
Ngaloo minyaka, uCesare wayengumlawuli wamabutho asepapa, kwaye iintshaba zakhe ezininzi zafunyanwa zifile eTiber. Kwiphulo elilodwa, wawahlula uGevanni Sforza, owayengumyeni waseLucrezia.
Umtshato wesithathu uxoxwe
Intombi encinci ye-papa yahlala ingumgqatswa wokuqala kumtshato olungiselelwe ukuqinisa amandla eBorgia. Indodana endala, kwaye yayicinga ukuba yindlalifa, kaDuke waseFerrara yayingumhlolokazi osandula. (Lo mfazi wokuqala wonyana wayenxulumene nomyeni wokuqala kaLucrezia.) I-Borgias yabona oku njengethuba lokusebenzisana nommandla owawuphakathi kombane wabo wamandla kunye nomnye ababefuna ukuzongeza kwilizwe lentsapho.
U-Ercole d'Este, uDuke waseFerrara, wayenqikaza ukutshata nendodana yakhe, u-Alfonso d'Este, kumfazi owayenemitshato emibini yokuqala yokutshatyalaliswa nokufa, okanye ukutshata nomtshato wabo osenyongweni eBorgia. . U-Ercole d'Este wadibana noKumkani waseFransi, owayefuna ukusebenzisana noPapa. Upapapa wasongela u-Ercole ngokulahlekelwa ngamazwe kunye nesihloko ukuba akazange avume. I-Ercole yaqhuba ingxoxo enzima ekugqibeleni, ekugqibeleni: idolide enkulu, isikhundla esontweni ngunyana wakhe, amanye amazwe angaphezulu, kunye nokunciphisa iintlawulo kwicawa. U-Ercole wayethetha ngokutshata noLucrezia ngokwakhe ukuba unyana wakhe, uAlfonso, akazange avume umtshato - kodwa uAlfonso wenza.
ULucrezia wayemkela umtshato. Wazisa i-trousseau enkulu kunye neendleko, kunye neendyebo kunye nezinye izinto ezixabisekileyo-zonke i-Ercole d'Este ezazisungula ngokufanelekileyo kwaye zihlolwe.
ULucrezia Borgia no-Alfonso d'Este batshata ngummeli kwiVatican ngoDisemba 30, ngo-1501. NgoJanuwari, wahamba kunye nabangu-1 000 ababeya eFerrara, kwaye ngoFebhuwari 2, abo babini babetshatile komnye komnye umkhosi osasazekayo.
Ukufa: uPapa noDuke
Ihlobo le-1503 lashisa kakhulu ngo-1503, kwaye i-mosquito ixhaphake. Uyise kaLucrezia wafa ngokungalindelekanga nge-malaria ngo-Agasti 18, 1503, ekugqibeleni iBorgia iceba ukuqinisa amandla. (Ezinye i-akhawunti zenza ukuba uCesare angcolise uyise ngeprotion ejoliswe komnye umntu.) UCésare usulelekile kodwa wasinda, kodwa wayegula kakhulu ekufeni kwakhe ukuba ahambe ngokukhawuleza ukuze alondoloze ubutyebi bentsapho yakhe. UCesare wayexhaswa nguPius III, upapa olandelayo, kodwa upapa wafa emva kweentsuku ezingama-26 eofisini. UGuliano Della Rovere, owayengumlingani ka-Aleksandriya kunye nexesha elide litshaba likaBorgias, wamkhohlisa uCesare ukuba ancedise ukhetho lwakhe njengoPapa, kodwa njengoJulius II , wavuselela izithembiso zakhe kuCesare. Izakhiwo zaseVatican zaseBorgia zatywinwa nguYulius owayevukele ngokuziphatha kakubi kwakhe. Bahlala besitywinwa de ukuya kwekhulu le-19.
Umthwalo oyintloko wolawulo lomfazi we-Renaissance kwakuza kubala abantwana, ngubani na oya kulawula okanye atshade kwezinye iintsapho ukuze amanyanise imibambano. ULucrezia wayekhulelwe ubuncinane ngamaxesha angama-11 ngexesha lomtshato wakhe u-Alfonso. Kwakukho amathrekhi ambalwa kwaye ubuncinane omnye umntwana oswelekileyo, kwaye abanye babini bafa besesana - inzala ye-syphilis echaphazela ukuba uyise okanye bobabini abazali baxelwa ngabalwazi-bambi abathile kule mpahla yokuzala. Kodwa abanye abantwana abahlanu basinda ebusaneni, kwaye ezimbini - uErcole no-Ippolito - bobabini basinda baze babe ngabantu abadala.
Unyana kaLucrezia uRodrigo emtshatweni wakhe u-Alfonso d'Aragon wakhuliswa kwintsapho kayise, indlalifa kwisihloko sikaAlfonso njengoDuke. ULucrezia wathatha inxaxheba kakhulu, nangona ekude, ekukhuliseni kwakhe. Wakhetha abasebenzi (abahambahambayo, abaqeqeshi) ababeza kumnakekela kunye ne-duchy wayeyindlalifa.
UGivanvan, "intsha yaseRoma" engathandabuzekiyo, wahlala noLucrezia iminyaka embalwa emva komtshato wakhe. Wamxhasa ngemali; Wayebizwa ngokusemthethweni njengomzalwana wakhe.
Izopolitiko kunye neMfazwe
ULucrezia, okwangoku, wayekhuselekile kwiFerrara. Xa umyeni wakhe ehlangene nemfazwe noPapa Julius II kunye noVenice ukususela ngo-1509, uLucrezia wayegubungela ubuncwane bakhe ukuze ancedise imali. Ekupheleni kwemfazwe, xa uJulius II wafa, waqalisa umgudu wokuzibuyisela umhlaba wezolimo kunye nokubuyisela ipropati yakhe.
UMphathiswa wezoBugcisa, uBusiness business
EFerrara, eLucrezia idibene nabaculi kunye nabalobi, kubandakanywa imbongi enguAriosto, kwaye bancedisa ukuzisa abaninzi enkundleni, kude njengoko bevela kwiVatican. Umbongi uPietro Bembo wayengomnye walabo awamxhaphaza, kwaye ukusuka kwiileta eziqhubekayo kuye, kucacile ukuba ubuhlobo babo babungaphezu kobuhlobo.
Uphando olutsha luye lwabonisa ukuba phakathi neminyaka yakhe eFerrara, uLucrezia wayengumfazi oqingqileyo weqashishini, wakha i-fortune yakhe ngempumelelo. Wayesebenzisa ubutyebi bakhe ukwakha izibhedlele kunye nezigulane, uzuze inhlonipho yezifundo zakhe. Ngamanye amaxesha wahlola indlu yakhe yomyeni. Utyalole kwilizwe lamanzi, walitshiza kwaye wabuyisela ukusetyenziswa kwezolimo.
ULucrezia naye wachazwa ukuba wayenemicimbi emininzi, kubandakanywa noBembo. Umyeni wakhe u-Alfonso d'Este naye akazange athembeke. U-Lucrezia wayenomdla wokuqala kunye nomntwana wakhe, u- Isabella d'Este , no-Isabella baqala ukufumana uLucrezia. Kodwa uCesare Borgia wagumbuqela umntakwabo ka-Isabella, yaye u-Isabella wahlala epholile ukuya eLucrezia. Umyeni ka-Isabella, uFrancesco Gonzaga, wayengenakulungela ukuya eLucrezia, kwaye le mibini yaqala ukuqala kwimizuzu engama-1503 ephela kuphela xa uFrancesco eqonda ukuba unayo i-syphilus.
ULucrezia wafumana ilizwi ngo-1512 ukuba unyana wakhe uRodrigo d'Aragon wayefile. Wabuya ebantwini bentlalo, nangona waqhubeka nezoshishino zakhe zorhwebo kuquka ukutyalwa kwelifa lakhe kwindodana yakhe kwimfuyo, ukwakhiwa komsele kunye nomsele wamanzi. Waphendukela ngakumbi kunqulo lwakhe, wachitha ixesha elingakumbi kwi-convents, waze waqala ukugqoka ihembe leenwele (isenzo sokubamba indlebe) phantsi kweengubo zakhe ezintle. Abavakatyeleli kuFerrara bavakalisa ngokunyamezela kwakhe, kwaye wayebonakala ekhula ngokukhawuleza. Wayephishekela ilifa lika-Giovanni, umzalwana wakhe, eSpain, waqhubeka nokuzama ukufumanisa iingubo zakhe zokugcoba ebudeni bemfazwe, ngaphambi kowe-1513. Wayekhulelwa emine kwaye mhlawumbi ukukhulelwa kwamanye amabini ukusuka ku-1514 ukuya ku-1519. Ngo-1518, wabhala yeencwadi zakhe eziseleyo, kwindodana yakhe uAlfonso owayeseFransi.
Ukufa kukaLucrezia Borgia
NgoJuni 14, 1519, uLucrezia wazala intombi eyayisweleke. ULucrezia wayenomkhuhlane waza wafa iintsuku ezilishumi emva koko. Ngethuba lokugula, wathumela incwadi eya kuPapa incomela indoda yakhe nabantwana kuye.
Wayelila ngokunyanisekileyo ngumyeni wakhe, intsapho kunye nezifundo.
Ezinye zezityholo ezinxamnye noLucrezia zivela
umyeni wakhe wokuqala, xa ephendula iintlawulo zokuba wayengenamandla kwaye akazange asebenze umtshato wabo kwiminyaka emine
UPapa uJulius II, owalandela uAlexander VI kunye nomyeni wakhe uLucrezia olwa naye
UNiccolo Macchiavelli, owathi amacala athathwe ngumntu osenyongweni
UFrancesco Guicciardini, umbhali-mlando, oye wabika ingxelo yokuxhatshazwa kunye namanye amahlebezi enkqantosi njengenyaniso
Udlala uVictor Hugo, uLucrezia Borgia
I-opera kaDonizetti, uLucrezia Borgia
Ngama-1505, sele sele eFerrara, uLucrezia wayenombenge webhedu owenziwe ngolu hlobo. Ngenye inye iboniswe iCapeid eboshwe kwisihlahla se-oki, "ikomidi eliboshwe," elimele imfuno yokulawula ukunyanzelisa umzimba. Oko, kunye nokuziphatha kwakhe kwexesha elininzi kwiFerrara, uthetha kwinto enokuzijonga ngayo inkolo kunye nokuziphatha kwakhe ngexesha lomtshato wakhe wokugqibela, emva kokuba ephuma ekulawuleni uyise kunye nomntakwabo.
Ngowe-1981, i-BBC Iingqungquthela ezimbini ze-TV I-Borgias yachithwa.
Ngo-2011, ingqungquthela eqingqiweyo yembali yentsapho yaseBorgia yaqala kuqala kwi-Showtime e-United States kwaye emva kwe-Bravo! eCanada. Olu luchungechunge, olubizwa ngokuba yi -Borgias, lucwangciswe njenge-arc yexesha eli-ezine. Kuphela iinyanga zonyaka ezintathu ezikhutshwayo, ngenxa yeendleko kunye nokulinganisa kwimixholo.
U-Holliday Granger wadlala uLucrezia Borgia, omnye wabalinganiswa abakhulu. Olu chungechunge lubonisa ukuba yena nomntakwabo babe nolwalamano oluncinci olwenziwe ngokomzimba, kwaye ekugqibeleni lusemzimbeni. Isiganeko sikaLucrezia esibanjwe nguKumkani waseFransi, kwaye simnceda ukuba asindise iRoma, yinto eqhelekileyo. Umtshato wakhe wokuqala kunye nomcimbi wakhe, ukuvelisa umntwana, kuboniswe kwiinyanga ezintathu.
Ixesha / Ixesha lexesha
NgoJanuwari 1, 1431: URodgrigo Borgia ozelwe njengoRoderic Llançol i de Borja.
NgoJulayi 13, 1442: Vannozza dei Cattanei wazalelwa, unina kaLucrezia Borgia.
Ngo-Epreli 1455: U-Alfons de Borja, umalume kaRodrigo Borgia, wakhetha uPapa uCallius III.
Phantse ngo-1468: UPere-Lluis uBorgia wazalwa, unyana kaRodrigo Borgia kunye nenkosikazi engaziwa.
1474: UGiovanni (uJuan) uBorgia wazalwa eRoma, unyana kaRodrigo Borgia kunye nenkosikazi yakhe u-Vannozza dei Cattanei.
1474: U-Giulia Farnese ozalelwe: inkosikazi kaPapa uAlexander VI owafudukela eVinnozza dei Cattanei.
NgoSeptemba 1475: UCésare Borgia wazalwa eRoma, unyana kaRodrigo Borgia kunye nenkosikazi yakhe uVannozzadei Cattanei.
Ngo-Epreli 1480: ULucrezia Borgia ozalelwa eSuacoaco, intombi kaRodrigo Borgia kunye nenkosikazi yakhe uVannozzadei Cattanei.
1481 okanye 1482: UGiffre wazalelwa eRoma, unyana kaVannozza Cattanei kunye no-Rodrigo. U Rodrigo wamkela njengonyana wakhe xa wayemthethweni, kodwa wabonisa ukungathandabuzeki ngoonyana bakhe.
1481: UCesare wagwetshwa nguFerdinand II.
1488: UPere-Lluis wasweleka eRoma. Wayephethe isihloko sikaDuke waseGandia, waza washiya isihloko sakhe kunye nokubamba umzalwana wakhe uGivanni.
NgoMeyi 21, 1489: U-Giulia Farnese watshata no-Orsino Orsini. Wayengumntwana waseAdriana de Mila, umzala wesithathu kuRodrigo Borgia.
1491: UCesare waba ngumbhishophu wasePamplona.
1492: ULucrezia waxhamla uGivanni Sforza.
Ngo-Agasti 11, 1492: URodrigo Borgia wakhetha njengoPapa uAlexander VI. UAscanio Sforza kunye noGiuliano della Rovere babenamandla akhe olwalamandla kuloo lonyulo.
1492: UCesare Borgia waba ngu-bhishophu waseValencia; UGiovanni Borgia waba nguDuke waseGandia eSpeyin, ilizwe laseBorgia; UGiffre Borgia wanikwa amazwe athatyathwe eNaples.
ngo-1493: U-Giulia Farnese wayehlala no-Adriana de Mila kunye noLucrezia Borgia egumbini elisecaleni, kwaye ufikeleleka kwi-Vatican.
NgoJuni 12, 1493: uLucrezia Borgia watshata noGivanvan Sforza.
1493: UGiovanni watshata no-Maria Enriquez, owayenqatshelwe ePere-Lluis.
NgoSeptemba 20, 1493: UCesare wamisela ikodina.
NgoJulayi 1497: U-Giovanni Borgia wasweleka eRoma: wayexhoba lokubulawa, kwaye umzimba wakhe waphoswa kwiTiber. UCesare waxelwa ukuba wayekhokele ekubulaweni.
NgoDisemba 27, 1497: Umtshato kaLucrezia kuGiovanni Sforza wachithwa ngokusemthethweni.
1498: UGiovanni Borgia ozelwe, mhlawumbi unyana kaLucrezia Borgia noPedro Caldes, nangona uAlexander noCesare bobabini baqanjwa ngamaphepha omthetho njengoyise, kwaye unina wayengenalo uLucrezia.
NgoJuni 28, 1498: uLucrezia watshata no-Alfonso d'Aragon ngummeli.
NgoJulayi 21, 1498: ULucrezia noAlfonso batshata ngomntu.
Ngo-Agasti 17, 1498: UCesare walahla ukulungiswa kwakhe - umntu wokuqala kwimbali yesonto ukulahla isikhundla sekhadidiyati kunye nesimo esamkelweyo. Wabizwa ngokuba nguDuke waseValeninois ngaloo mini ngu-King Louis XII waseFransi.
NgoMeyi 10, 1499: UCesare watshata noCharlotte d'Albret, udade kaJohn III weNararre.
NgoNovemba 1, 1499: uRodrigo d'Aragona wazalelwa uLucrezia noAlfonso.
1499 okanye i-1500: UGiulia Farnese wayengenalo uthando ngumthandi wakhe, uPapa Alexander.
NgoJulayi 15, 1500: UAlfonso wasinda inzame yokubulala.
Agasti 18, 1500: UAlfonso wabulawa.
1500: uLucrezia wathumela eNepi ezintabeni zase-Etruscan.
1501: Imfazwe yaseNaples: uCesare walwa neFransi ngokumelene noFerdinand waseSpain
1501: ULucrezia wavela kunye noGiovanni, u-Infans uRomanus (umntwana waseRoma), kunye noPapa baphuma iinkunzi zombini zivuma ukuba umntwana wayeyindoda yowesifazane ongenagama igama kunye noCesare okanye uAlexander
NgoDisemba 30, 1501: ULucrezia noAlfonso d'Este batshata ngummeli kwiVatican.
NgoFebhuwari 2, 1502: ULucrezia noAlfonso d'Este batshata ngomntu eFerrara.
1502: UGioffre uqinisekiswe nguFerdinand waseSpeyin njengesikhulu saseClaillace.
Ngo-Agasti 18, 1503: uAlexander VI wafa ngenxa ye-malaria; UCesare wa suleleka kodwa akazange ahluthe. UPius III wokuqala waza uJulius II waphumelela uAlexander njengoPapa.
1504: UCésare Borgia waya e-Spain.
15 Juni 1505: I-Ercole d'Este yafa, kwaye u-Alfonso d'Este waba nguDuke kunye noLucrezia baba yi-Duchess consort.
1505: ULaura Orsini, intombi kaGiulia Farnese kunye no-Alexander VI, watshata nomntakwabo uPapa Julius II.
Ngo-Matshi 12, 1507: UCesare wafa e-Battle of Viana e-Navarre.
1508: Ercole d'Este II ozelwe nguLucrezia Borgia noAlfonso d'Este; wayeza kuba yindlalifa kayise.
1510: UPapa uJulius II wamxotha u-Alfonso d'Este ngenxaxheba yakhe ekulwa noVenice ngasecaleni lamaFrentshi, waza wathi yena kunye neendlalifa zakhe babengenabango ku-Modena noReggio.
1512: URodrigo d'Aragon wafa.
NgoJuni 14, 1514: ULucrezia Borgia wabulawa ngumkhuhlane emva kokusindisa intombi eyayingumntwana.
1517: UGiffre uswele eScillace.
1518: U-Vannozza dei Cattenei, unina kaLucrezia, wafa.
NgoMatshi 23, 1524: uGuulia Farnese wafa.
1526 - 1527: UAlfonso d'Este walwa noCharles V, uMlawuli oyiNgcwele oyiRoma, ngokumelene noPapa uClement VII, ukubuyisela uModena noReggio
1528: Ercole d'Este (Ercole II) watshata noRenee waseFransi, intombi kaKumkani Louis XII waseFransi kunye no- Anne weBrittany ocebileyo. Ngenxa yovelwano lwakhe kunye neProtestanti, kamva waba ngumxholo wesilingo sobuxoki.
1530: UPapa uClement VII waqaphela ukuba uAlfonso d'Este ubango lukaModena noReggio
Oktobha 31, 1534: UAlfonso d'Este wafa, waza waphumelela ngu-Ercole II, unyana wakhe nguLucrezia Borgia.
> USara Bradford, uLucrezia Borgia: Ubomi, Uthando, nokufa kwi-Renaissance Italy , 2005.
> UMaria Bellonci, Ubomi kunye namaxesha kaLucrezia Borgia , 2003.
> GJ Meyer, i -Borgias: Imbali efihliweyo , ngo-2013.
> Maike Vogt-Lüerssen, uLucrezia Borgia: Ubomi bendodakazi kaPapa kwi-Renaissance , ngo-2014.
> Rachel Erlanger, uLucrezia Borgia: I-Biography , ngo-1985.
Lucrezia Borgia Facts
Imihla: Epreli 18, 1480-Juni 14, 1514
Umama: Vannozza dei Cattanei
UBawo: uRodrigo Borgia (uPapa uAlexander VI), umntakwabo uPapa Callixtus III, kunye nelungu leentsapho zaseCatalan (iSpanish) eziphakamileyo.
Abantakwabo abakhulu: uGivanni, uCesare, noGiffre (nangona uRodrigo Borgia kubonakala ukuba wayenalo ukungabaza ukuba wayengumzali kaGiffre).
Izihloko: Umfazi wePeraro noGradara, 1492 - 1497; I-Duchess consort kaFerrara, uModena noReggio, 1505 - 1519.
Ukuvulwa kweJapan: I-Commodore uMathem C. Perry
UMary Wollstonecraft: Ubomi
Imfazwe Yehlabathi II: I-Marshall Field uSir Harold Alexander
UDkt. Mary E. Walker
Amalungu omNtsapho oMama kaMprofeti uMuhammad
Intsha yaseKayak Ukuthelekiswa: I-Pelican Solo kunye ne-Lifetime Wave
Ngaba amajoni amaRoma ayidle inyama?
Imfazwe YaseMerika Yomkhosi: I-Admiral yaseRainal Semmes
Nkomfa ye Heartland
Izikhundla eziphezulu ze-Cheerleading: Ukuhamba, ukuSekela, kunye nokuSebenza